ဘဲသားအချိုကြော် | Wutyee Food House
« ရန်ကုန် မုန့်ဟင်းခါး (အိုးဘဲဥ)
နှင်းဆီ ပုဇွန် »
February 14, 2012 by chowutyee ဘဲသားအချိုကြော်
ဘဲသားအချိုကြော်ကို ဒီနေ့ ညနေစာအဖြစ်လုပ်စားဖြစ်တာနဲ့ တင်လိုက်တာ… အိမ်သားတွေတော့ တော်တော်ကြိုက်ကြတယ်။ ပြင်ဆင်ထားတာ လေးကလည်း စားချင်စဖွယ်လေး၊ ငရုတ်ကောင်းနံလေးကလည်း မွှေးနေတာမို့ မစားသေးခင်ကပင် စားချင်နေမယ့် ဘဲသား အချိုကြော်ကို သုံးဆောင်သွားကြပါအုန်းနော်….
၁။ ဘဲ – ၃၀ကျပ်သား (တခြမ်း)
၂။ ငရုတ်ကောင်း – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က် (ထောင်းပါ)
၃။ ပဲငံပြာရည် အကြည် – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
၄။ ကော်မှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၅။ ပျားရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၆။ ပဲငံပြာရည် အနောက် – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
၇။ ရေ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၈။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၉။ ကြက်သားမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁။ ဘဲရင်ဗုံသားကို ခွက်တစ်ခုထဲထည့်ပြီး ခရင်းဖြင့် အပျောက်လေးများဖြစ်အောင် ထိုးပါ။
၂။ ပြီးမှ ဘဲသားမှအပ ပါဝင်သော ပစ္စည်းအားလုံးကို(ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ ပဲငံပြာရည်အနောက်၊ ပျားရည်၊ ကော်မှုန့်၊ ရေ၊ ဆား၊ သကြား၊ ကြက်သားမှုန့်) အားလုံးကို ခွက်တခုထဲ ရောမွှေလိုက်ပါ။
၃။ ထို့နောက် ဘဲသားပေါ် လောင်းချကာ သမအောင် နုယ်ထားပြီး ၁နာရီခန့် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် နုပ်ထားပေးပါ။
၃။ ချက်ခါနီး ၁၅မိနစ် အလိုမှ ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ပြန်ထုတ်ထားပေးပါ။
၄။ ဒယ်ထဲ ဆီများများထည့်၍ နုပ်ထားသော ဘဲသားကို အညှိရောင်သန်းလာသည်အထိ မီးနည်းနည်းဖြင့် ကြော်ပေးပါ။
၅။ ကြော်ပြီးလျှင် ဘဲရင်ဗုံသားကို စတီခွက်တစ်ခုထဲထည့်၍ ပေါင်းအိုးဖြင့် ၁၀မိနစ်ခန့်ပေါင်းပေးပါ။
၆။ ပြီးလျှင် ဘဲသားကို လှီးပြီး ပန်းကန်ပြားတွင် ပုံဖော်ထားပါ။ နုပ်ထားသော ဘဲသား အရည်များကို ပျစ်အောင် တည်ပြီး အပေါ်မှ ဖြူးပေးပါ။
ရ။ ပုံဖော်ရန် broccoliကို အတုံးလေးများတုံးပေးပါ။ ပြီးမှ ရေနွေးဖြင့် ၃မိနစ်ဖြင့် ပြုတ်ပေးပြီး ရေအေးပြန်စိမ်ထားပါ။
၈။ ပြီးလျှင် broccoliကို ဆား၊ သကြား အနည်းငယ်ဖြင့် ရောမွှေပေးပါ။
၉။ broccoli များကိုပုံတွင်ပါသည့်အတိုင်း ပန်းကန်ပြားထဲတွင် ပုံဖော်လိုက်ပါ။
၁၀။ အာလူးများကို နူးအောင် ပြုတ်ပြီ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ဖြင့် သမအောင် နုယ်ထားပေးပါ။
၁၁။ အရသာအလွန်ကောင်းပြီး ငရုတ်ကောင်းနံမွှေးနေသည့် ဘဲသား အချိုကြော်ကို စားသုံးနိုင်ပါပြီး။
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 17 Comments	17 Responses
on February 2, 2010 at 2:15 pm | Reply Hmone Gyi
wow look very yummy yummy it look like roast duck😀
on February 2, 2010 at 2:20 pm | Reply chowutyee
ဘဲကင်နဲ့တော့ ပုံကခပ်ဆင်ဆင်ပဲ.. ဒါပေမယ့် အရသာတော့မတူဘူး.. ဒီဟင်းက ချိုပြီး ငရုတ်ကောင်းနံ့လေးသင်းနေတာ…
on February 2, 2010 at 3:42 pm | Reply Trader Begger
on February 2, 2010 at 3:48 pm | Reply chowutyee
ကိုကြီးကလည်း မီးပျက်နေတဲ့ကြားက မရရအောင် ရိုက်ထားတော့ ပုံက မှောင်တာပေါ့… တကယ်က ပိုလှပါတယ်..😉
on February 2, 2010 at 4:50 pm | Reply Fatty
I want to eat!😀
on February 4, 2010 at 6:34 am | Reply chowutyee
စားပြီးလည်း စားချင်တုန်းပဲ လား ဖက်တီး..🙂
on February 4, 2010 at 11:12 am | Reply Fatty
on February 14, 2012 at 1:03 pm | Reply Elisha Yu Saing
I will test it ! Looks yummy.
on February 16, 2012 at 2:09 pm | Reply chowutyee
Plz try it, sis😛
on February 19, 2012 at 11:32 pm | Reply TTSweet
စားချင်စဖွယ်ပဲ။ ၀တ်ရည်နဲ့ တစ်အိမ်ထဲ အတူနေချင်လိုက်တာ။း)
on February 21, 2012 at 9:31 am | Reply chowutyee
ဟီးဟီး ၀တ်ရည်နဲ့ တူတူနေရင် ၀လာမှာ။ သိပ်တော့ကောင်းဘူး..😀
on February 20, 2012 at 10:25 am | Reply ခင်ယမုံ
on February 21, 2012 at 9:36 am | Reply chowutyee
မခင်ယမုံ၊ ဒီဘဲသားအချိုကြော်က အရမ်းစားကောင်းတယ်.. ကြက်နဲ့ဆိုရင် အရသာတူမယ် မထင်ဘူး.. ကျေးဇူးပါနော်
on February 22, 2012 at 11:17 am | Reply yuki
ဟဲဟဲ အကြိုက်ကိုတွေ့နေတာပဲ..လုပ်စားလိုက်ဦးမယ်..ပေါင်းအိုးဆိုတာ pressure cooker ကိုပြောတာလား ညီမလေး ရေ…
on February 25, 2012 at 6:17 pm | Reply chowutyee
မရေ ၀တ်ရည်ကတော့ ရိုးရိုး (ပေါက်စီ) တို့ဘာတို့ ပေါင်းအိုးနဲ့ပဲ ပေါင်းတာပါ… လုပ်စားကြည့်ပါနော် မ… Thanks🙂
on May 14, 2012 at 2:07 pm | Reply About: Cho Wut Yee
[…] February 14, 2012 ဘဲသားအချိုကြော် […]
on May 21, 2012 at 3:21 pm | Reply Mee
့honey မထည့်ပဲ ချက်လို့ေ၇ာရပါလား